ငါးပေါင်း ငရုတ်သံပရာဆော့ | Wutyee Food House
« Chicken Ala King ဟင်း
ပုဇွန် နှင့် ဟင်းရွက်စုံ ငပျောရွက်ပေါင်း »
April 1, 2010 by chowutyee ငါးပေါင်း ငရုတ်သံပရာဆော့
၁။ ငါးကြင်း ဗိုက်သား – ၂၀ကျပ်သား
၂။ ပဲငံပြာရည် အကြည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
၃။ သံပရာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၄။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၅မွှာ (အ၀ိုင်းပါးပါးလှီးပါ)
၅။ ဇီးချိုသီး – ၂လုံး
၆။ ငရုတ်သီး စိမ်း – ၃တောင့် (ပါးပါးလှီးပါ)
၇။ သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၈။ နံနံပင် – ၁စည်း
၁။ ငါးကြင်းကို စင်အောင် ဆေးကြောပြီး ဗိုက်သားကို အရိုးထုတ်ပေးပြီး ဇောက်ပန်းကန်လုံး တစ်ခုထဲ ထည့်ထားပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ငါးကြင်းကို ဆား (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်) ထည့် နယ်ပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် ဆော့ရည် အတွက် ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ( ကြက်သွန်ဖြူ၊ သံပရာရည်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ သကြား၊ ပဲငံပြာရည်၊ ရေ(လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံး ၁လုံး) ) အားလုံးကို ပန်းကန်လုံး တစ်ခုထဲ ထည့်ပြီး ချဉ်ကဲ အရသာ ရအောင် ရောစပ်ပေးပါ။
၃။ ထိုဆော့အရည်များကို ငါးကြင်းထည့်ထားသော ဇောက်ခွက်အတွင်းသို့ လောင်းထည့်ပေးပြီး ဆီးချိုသီး ထည့်၍ အပေါ်မှ နံနံပင် အုပ်ပေးပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ငါးကြင်းခွက်ကို ပေါင်းအိုးထဲ ထည့်ပြီး မီးများများဖြင့် ၁၅မိနစ်ခန့် ပေါင်းပေးပါ။
၅။ စားချင်စဖွယ် အရသာရှိသော ငါးပေါင်း ငရုတ်သံရာဆော့ကို စားသုံးနိုင်ပါပြီး။
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 16 Comments	16 Responses
on April 1, 2010 at 12:07 pm | Reply Hmone Gyi
look very delicious…i want to eat b/c i cant cook fish well😦
on April 1, 2010 at 12:21 pm | Reply chowutyee
ဒါက ငါးကို ကိုင်စရာ သိပ်မလိုပါဘူး.. ငါးပေါင်းလေ ချက်ရလွယ်ပါတယ်..😉
on April 1, 2010 at 6:48 pm | Reply Moe Thaike
on April 2, 2010 at 11:13 am | Reply chowutyee
မမိုးရေ ကတ်ကတစ်ငါးနဲ့ ပေါင်းရင်လည်း စားလို့ကောင်းတယ်..🙂
on April 2, 2010 at 8:46 am | Reply astk
but ငါးကြင်းမရှိလို့ ငါးမန်းပေါင်းလိုက်တယ်…
on April 2, 2010 at 11:15 am | Reply chowutyee
အင်း ငါးမန်းပေါင်း တခါမှ မစားဖူးဘူး။ လုပ်စားအုန်းမှ..😉
on April 3, 2010 at 6:56 am | Reply astk
ya.. its nice. but i think i put too much sugar that it’s quite sweet.😀
on April 4, 2010 at 11:42 pm | Reply Moe Thaike
on April 24, 2010 at 5:12 pm | Reply PyayKo
ငါးကြင်းနဲ့လုပ်စားလိုက်တယ်ဗျို့.. ကောင်းသလားတော့ မမေးနဲ့.. ကိုယ့်လက်ရာမလို့လား.. မသိဘူး 😀 ကျေးဇူးပဲဗျို့ 🙂
on April 25, 2010 at 6:44 am | Reply chowutyee
No problem!!! Thank you also!!🙂
on October 9, 2011 at 8:26 am | Reply jue
on October 10, 2011 at 6:15 am | Reply chowutyee
on March 21, 2012 at 11:34 pm | Reply khin thandar
Sis ..how to call ငါးကြင်း in English ? And Seabass is what kind of fish?
Can i use these two kind of fishes either one if I cannot find?
on March 28, 2012 at 3:26 pm | Reply chowutyee
ငါးကြင်း= mrigal .. Seabass .နဲ့တော့ ချက်လို့ရလောက်တယ်.. Plz try it Thanks.🙂
on March 21, 2012 at 11:36 pm | Reply khin thandar
And Also ကကတစ် in English? Maw par tae sis. Coz I amastarting learner.
on March 28, 2012 at 3:33 pm | Reply chowutyee
ကကတစ် = becti, bectie, gaint sea perch.🙂